HILIBKA ROOGGA HILIBKA EE SONKOROWGA MELLITUS: ISTICMAALKA, GURYAHA IYO KA HORTAGA - SOOSAARKA DALAGGA
Geediga geedka (galega): isticmaalka, guryaha, khilaafaadka
Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, dadku waxay u leexiyaan dhirta daawada si ay u caawiyaan marka ay qabaan dhibaatooyin caafimaad. Markii hore, waxay ahayd fursad keliya ee bogsashada, laakiin hadda waxaa jira wax kale - diyaarinta daawooyinka. Haddii aad isku darayso kuwan iyo habab kale, waxaad samayn kartaa daaweyn aad wax ku ool ah oo waxyeello u geysata jirka. Maanta waxaan ka hadli doonaa ariga cawska, taas oo ka caawisa yaraynta heerka sonkorta dhiigga waxayna hagaajineysaa xaaladda guud ee jidhka ee leh sonkorowga.
Waa maxay cawska riyaha
Galega ama roodhidu waa geedka qashinka ah oo ka tirsan qoyska legume.
Xerooyinka geedka ah waxaa ka mid ah dhirta sida canna, echinacea, lafaha oo dhuuban, iridiin, hymenokallis, erigeron, Venus flytrap, rogeria, rudbeckia, sinjiga.
Warshadu waxay leedahay mid adag oo adag, xoog leh oo qumman oo siman oo koraya ilaa 1 m dherer, iyo sidoo kale laamo qaro weyn. Kozlyatnik daboolayaa caleemaha soo socda, cabirka kaas oo gaaraya 15-20 cm, iyo waxaa loo qorsheeyey in labo-jajab ah ee 4-10 gogo '.
Inta lagu jiro xilliga ubax, kaas oo dhacaya June-August, dhirta waxaa la daboolay ubaxyada sida boodhow-sida, kuwaas oo la sameeyay ee axils of caleemo sare. Caleemaha waxaa lagu rinjiyeeyay guduud, buluug ama midab aad u yar. Dhamaadka miraha ubaxu u bislaadaan - digirta, 2-4 cm dhererka.
Galega waxay ku agbicisaa wabiyada, tuulooyinka iyo durdurrada, oo ku dhex jira geedaha, kabaha, iyo sidoo kale qoyanaha iyo godadka qoyan. Waxaa lagu faafin karo dhirta ama abuurka.
Dabeecadda, dakhliga cowska ah waxaa laga helaa Carpathians iyo Crimea, Caucasus, Moldova iyo qaybta Yurub ee Ruushka.
Waa muhiim! Inkasta oo guryaha dawooyinka ah, ay dhirtu u tahay sun, sidaas darteed ka hor intaadan isticmaalin waa inaad la tashatid khabiiro oo doortaan qiyaasta saxda ah si aan wax u yeelin caafimaadkaaga.
Dhoofinta geedaha ah waxay ka kooban tahay kiimiko aad u taajir ah. Waxaa ku jira saponins, alkaloids, fareeshka iyo xeryaha nitrogen, qadhaadh, carotene iyo asiidhyada organic.
Qalabka waxtarka leh ee riyaha ayaa ka mid ah kuwan soo socda:
waxay kordhisaa cadaadiska dhiigga;
wuxuu kor u qaadaa xajinta;
waxay kordhisaa nuujinta;
Si loo hagaajiyo nuujinta, waxay isticmaalaan miraha fennel, saliida walnut, cantalya, peony, shinni, shinbir, iyo caan.
wuxuu leeyahay saameyn waxtarkeeda ku leh mareenka mindhicirka;
Waxay hagaajisaa shaqada beerka;
waxay caadi u tahay heerarka gulukooska dhiigga;
wax ku ool ah caabuqa hunguriga iyo qandhada, wuxuu leeyahay saameyn diaphoretic ah;
loo isticmaalo sida wakiilka anthelmintic;
dibedda loo isticmaalo cambaarta iyo ka leexashada;
waxay kor u qaadeysaa dheef-shiid kiimikaad
Waa muhiim! Gaar ahaan waxtarka ayaa ah isticmaalka caanaha riyaha marxaladaha hore ee sonkorowga nooca 2 ah. Haddii dhirta dawadani ay ku jirto daaweynta waqtigeeda iyo saxda ah iyo cuntada la raaco, insulinta looma baahna.
Marka laga soo tago xaqiiqda ah in galega ay ka caawiso in la yareeyo heerarka sonkorta dhiigga waxayna ka hortagi kartaa boodhka fiiqan, waxaa loogu talagalay sonkorowga sababta oo ah sifooyinka wanaagsan ee soo socda:
waxay gacan ka geystaan ​​adkaynta derbiyada xididdada dhiigga;
wuxuu ka qaadaa kolesteroolka waxyeelada leh jirka;
loo adeegsaday xoojinta iyo hagaajinta murqaha muruqyada jilicsan ee xubnaha gudaha;
wuxuu caadi u yahay wareegga dareeraha jirka.
Haddii sokorow, waxaa lagula talinayaa in aad isticmaasho dabocase cad, pomelo, jilif jilicsan, malab malab, sorrel dhanaan, geedo stevia.
Galegu waxaa loo isticmaalaa in lagu diyaariyo infusions, tinctures, decoctions, iyo sidoo kale isticmaalaan caleenta qalalan, burbur ah ee warshad this. Aynu eegno sida loo sameeyo daawo geedeed oo wax ku ool ah oo loogu talagalay sonkorowga iyadoo ku saleysan geedaha gurigaan.
Ogsoonow qaybaha kala duwan ee dakhliga kala duwan ayaa loo isticmaalaa cuntooyinka kala duwan.
Wixii diyaarinta maraq bogsiinta u baahan doonaa:
1 tsp Talooyin qallalan oo qallalan ee galega;
200 ml biyo qabow.
Qalabka cagaarshow waa in la dhigaa duufaan, ku shub biyo qabow oo gashana dab yar. Isku daa isku kari ilaa shan daqiiqo. Ka dib markaa, waxaad u baahan tahay inaad daboolka ku dabooleyso daboolka oo u diyaari 2 saacadood. Waqti go'an ka dib, waa in la miiro oo lagu shubaa weelasha galaaska.
U qaado maraq saddex jeer maalintii ilaa 1 tbsp. l Fadlan ogow in daawadani tahay duri ah.
Ma taqaanaa? Mid ka mid ah calaamadaha ugu xun ee cudurka macaanka waa indho la'aan. Marxaladaha ugu horeeya, heerkulka sare ee sonkorta wuxuu xanuujiyaa horumarka glaucoma iyo cataracts, ka dibna wuxuu dhumiyaa derbiyada xididdada dhiigga ee qofku lumiyo indhihiisa.
Si loo diyaariyo faleebo, waa inaad diyaarisaa:
2 tbsp. l cawska ariga qalalan;
2 tsp. orgiga faraska;
Maaddooyinka qallalan waxay ku seexdaan darmuuska, ku shub biyo karkaraya oo habeenkii ka baxa ama 12 saacadood. Kadibna faleebo ayaa lagu sifeeyaa faashad ama shaandho. Qaado 100 ml 3-4 jeer maalintii, doorbidayaa 30 daqiiqo cuntada ka hor.
Diyaarinta daawooyinka noocan oo kale ah waxay u baahan doontaa:
100 g caleemaha ariga (qalalan);
100 ml oo khamri ama vodka.
Alaabta ceymiska waa in lagu dhejiyo weel dhalada ah, ku shub khamriga, una dir si aad ugu dhajiso meel qabow mug leh 7-10 maalmood. Dabadeed daroogada ayaa la sifeeyaa oo qaato 15-20 dhibcood 3 jeer maalintii cuntada kadib. Ha qaadan tincture muddo ka badan 30 maalmood.
Ma taqaanaa? Sababaha ugu badan ee sonkorowga macaanka iyo horumarka sonkorowga waa cayil, cunto caafimaad daro ah iyo qaab nololeed.
Marka laga soo tago daawooyinka kor ku xusan, qaba sonkorowga, waxaad qaadan kartaa caleemo la jajabiyey iyo inflorescences ee dhirta ee 1 tbsp. l iyo cab biyo badan. Isticmaalka kozlyatnika ee qeyb ka mid ah khidmadaha, tusaale ahaan, oo lagu daro løvetann, canabaha iyo digirta ayaa sidoo kale loo tixgeliyaa waxtar.
Macaawinada caanaha laguma taliyo marka:
xanuunada habdhiska kaadida iyo xiidmaha;
uurka iyo nuujinta;
carruurta ilaa 16 sano.
Hadda waxaad ogtahay in riiggu uu ka caawiyo sidii caadiga ahayd heerkulka gulukooska ee dhiigga, iyo sidoo kale ka hortagaya boodboodka. Warshadan bogsashada ah ayaa ah mid aad u fiican marka lagu jiro daaweynta cudurka macaanka waxayna kaa caawineysaa inaadan kantaroolin heerka sonkorta, laakiin sidoo kale xoojinta jirkaaga.
Cunto-qoyseedka ayaa loo tixgeliyaa qalab aad u firfircoon ee ka hortaga cudurrada caadiga ah, gaar ahaan marxaladaha hore.